Faylka Madow ee Farmaajo oo kashaqeynaya in Jubbaland laduqeeyo - Banaadisom
Home Wararka Maanta Faylka Madow ee Farmaajo oo kashaqeynaya in Jubbaland laduqeeyo
Faylka Madow ee Farmaajo oo kashaqeynaya in Jubbaland laduqeeyo
warar hoose oo isa soo taraya ayaa muujinaya in MD Farmaajo lagu qanciyey in dagaalka jubaland loo adeegsado xeelado meleteri oo dhanka cirka ah.
horaantii bishan ayaa lasheegey in dowlada federalka dib u bilowdey dhaqdhaqaaqyadii ay kawadey gobolka gedo oo katirsan maamulka Jubaland kaas oo dowladu sheegtey in ay difaaceyso xuduudaha dalka soomaaliya.
ilo xog ogaal ah ayaa sheegaya in howl galkan loo xilsaarey Col. Cabdullahi Dheere oo ah saxiibka dhow ee MD Farmaajo una dhashey beesha Axmed madoobe.
Hadaba Waa kuma Ninkan Kenya Iyo Jubaland in la duqeeyo ka shaqeenaya.
Col. Cabdullahi Dahir ayaa la rumeysanyahay in uu yahay ‘Fileka madow; ee madaxweyne Farmaajo u adeegsada howlgalada culus.
Sargaalkan ayaa lasheegey in uu gacansaar dhow laleeyahay sirdoonada caalami ah, wuxuuna ku hadlaa luqadaha Ingiriiska, Carabiga, Soomaaliga iyo laqada Cibraaniga oo ay ku hadlaan dad yahuuda ah.
sargaalkan ayaa NISA ugu magacaaban Hogaanka dabagalka, hayeeshee waxaa lafahamsanayahay in uu katirsan yahay hay’ada CIA-da mareykanka qeybteeda geeska africa, wuxuuna tababaro caalami ah kasoo qaatey Magaalada Tel-Aviv Caasimada Israa`iil sida ay noo xaqiijiyeen saraakiil ku dhow kudhow.
sargaalkan ayaa waxbadan ka ogaa qaraxii gobolka banaadir ee lagu diley guddoomiyihii Gobolka Banaadir Eng. Yariisow iyo Qaraxii Gaalkacayo ee lagu khaarijiyey saraakiil sare sida ay noo sheegeen ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo, balse uu ka gaabsadey in uu xogtaasi la wadaago laamihii amaanka ay quseysey.
madaxweyne Farmaajo ayaa lasheegey in sargaalkan ku qarsado siraha dowlada ee dhanka amaanka iyo xiriirada qarsoon ee dowlada.
masuulkan ayaa lasheegey in Dowlada Turkiga kala wareegey 18 diseembar diyaaradaha wax basaasa ee loo yaqaano Drones kuwaas oo gaaraya 6 diyaaradood.
28 jirkan ayaa lasheegey in uu abti u yahay Axmed Godane Hogaamihii Alshabaab ee ladiley isla markaana si dhow ula shaqeyn jirey.
Dowlada Mareykanka ayaa lagu soo waramayaa in ay ka hor istaagtey sargaalkan weeraro dhowr ah oo uu doonayey in uu ku beegsado Mucaaradka Dowlada Soomaaliya waxaana tiro dhowr jeer lagu eedeeyey in uusan la gabban taageerada uu u hayo MD Farmaajo.
Sargaalkan ayaa lafahamsanyahay in MD Farmaajo kula teliyo in xoog wax lagu xaliyo.
Dhinaca kale fahad yaasiin ayaa lasheegey in aad ula dhacsanayahay hab dhaqanka iyo qalafsanaanta sargaalkan wuxuuna markasta kala tashadaa arimaha xasaasiga ah ee soo kordha.
Arinta yaabka leh ayaa ah ninkaan in uu gacantiisa ku wato gaari proof ah oo aan xabadu karin isla markaana ilaalo la’aan ah.
qorshaha howlgalada Jubaland ayaa hada lasheegayaa in lagu wareejiyey Masuulkan wuxuuna durba bilaabey dhaq dhaqaaqyo xoogan iyo sidii loo duqeyn lahaa Goobaha muhiimka u ah maamulka Jubaland.
warar hoose ayaa sheegaya in sargaalkan bartilmaadeed kadhigtey madaxtooyada Jubaland iyo qaar kamid ah xaruumaha ciidanka daraawiishta Jubaland sida ay muujineyso xogo amni ah oo aan helney.
Sargaalkan ayaa isticmaala magacyo dhowr ah wuxuuna xaruunta Nabad sugida ku galaa Maxamed Dheere, halka magaaladana loogu yaqaano ugaaska Soomaaliyeed waxaana xitaa aqoon saraakiisha uu maamulo ee ka hooseeya.
wararka qaar ayaa sheegaya in sargaalkan safar degdeg ah ugu baxey dalkaasi Qadar lamana oga ujeedka safarkiisa xilli ay xaalada magaalada muqdisho cakiran tahay, waxaase larumeysan yahay in uu ka maqanyahay abaabul dagaal oo loogu hortagaayo mucaaradka dowlada iyo maamulka Jubaland.
Previous articleBukaan coronavirus qabay oo garaacis nafta kaga qaaday bukaan kale oo tukanayay
Next articleDAAWO MUUQAAL :Yaab leh Ciidanka Somalia Geysey Xadka Kenya Horay Loo Arag iyo Dalka Ciidankani Ku Tageeray Somalia